King Zero: ခေါင်းဆောင်တို့ ကျင့်စဉ်
သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ဖွင့်ပွဲ
ရှေးဦးစွာ နားထောင်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကို မေတ္တာရပ်ခံထားချင်တာ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ငြိမ်ငြိမ်တိတ်တိတ်၊ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့ မူဝါဒ၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်တို့ရဲ့ Country-side-ဒေသမှာ ရဟန်းခံ လာကြတဲ့ ကျေးလက်က ရဟန်းအပါး (၅၀၀) ဘုရားနဲ့ သာရိပုတ္တရာ၊ မောဂ္ဂလာန်တို့ နေရာကို ဘုရားဖူးဖို့ ရောက်လာကြတယ်။ ဟိုအလွန်ဝေးတဲ့ Remote place-ကနေ သာဝတ္ထိဆိုတဲ့ Capital-ကို ရောက်တော့ သူတို့မှာ မမြင်ဘူးတာ၊ မတွေ့ဘူးတာတွေ၊ မကြားဘူးတာတွေ သိပ်များတော့ မြင်လိုက်ရင် ဟာကနဲ့၊ ဟယ်ကနဲ့ အခုနက တမ္ပ၀တီဦးဝင်းမောင်ပြောတဲ့ ပန်းဆယ်မျိုးကို စိတ်ဝင်စား တတ်ရင် ဒီကျောင်းတော်ကြီး ထဲမှာ ဟာ, ဟယ် ဒီလိုဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ဇေတ၀န် ကျောင်းတော်ကြီးကို ရောက်တော့ တအံ့တသြတွေ ဖြစ်တော့ တပါးနဲ့ တပါး အပါး (၅၀၀) တောက ကိုယ်တော်တွေရော၊ မြို့က ကိုယ်တော်တွေရော ဆုံလိုက်တော့ နှုတ်ဆက်စကား ပြောတာ၊ တောကကိုယ်တော် (၅၀၀)နဲ့ မြို့က ကိုယ်တော် အပါး (၅၀၀)စကား ပြောရင် အပါး (၁၀၀၀)ပြောတဲ့ စကားဖြစ်မယ်။ အဲဒါတွေ ဇေတ၀န် ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ ညံနေတာ၊ ဆူနေတာ၊ အဲဒါတွေ မြတ်စွာဘုရားကြားတော့… ဟဲ့ ဟဲ့. . . ညံလှချည်လား ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ ဘာသံတွေလဲ? တောရဟန်းနဲ့ မြို့ရဟန်းတွေ မတွေ့တာကြာလို့ နှုတ်ဆက်တဲ့ အသံတွေ ပါဘုရား။
သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာ ရှိကြပါစေ
Posted by dhamma at 11:40 AM
သာသနာ့အာဇာနည် ရွှေည၀ါ ဆရာတော်ကြီးမှ သာသနာအတွက် နိုင...
၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်စဉ် ရောက်...
ပတိရူပဒေသ၀ါသ သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော အရပ်ဒေသ